Namorona biraon'ny telefaona finday izy ireo hamantarana ny sida sy syphilis - Afrikhepri Fondation
Namorona fitaovana smartphone izy ireo mba hahitana ny SIDA sy ny sophilis
DIreo injeniera amerikanina dia namolavola fitaovana finday lafo vidy mora nahitana haingana ny SIDA sy ny syphilis. Ny fitaovana iray dia mamoaka voalohany ny asan'ny mekanika, optique ary elektronika an'ny rafitra fandalinana laboratoara, hoy ny mpamorona azy tamin'ny Alarobia tao amin'ny gazety ara-pitsaboana amerikanina Science Translational Medicine. Ny angovo herinaratra rehetra dia omen'ny smartphone. Ity fitaovana kely ity, izay azo ampidirina anaty solosaina ihany koa, dia notsapain'ny mpiasan'ny fahasalamana tany Rwanda tato ho ato. Nodinihin'izy ireo ny rano indray mitete nalaina avy amin'ny rantsan'ireo vehivavy 96 noraisina ho anisan'ny programa iray hisorohana ny fifindran'ny SIDA amin'ny reny mankany amin'ny zaza.
Mampiseho ny asanay fa ny famakafakana amin'ny laboratoara feno dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fitaovana finday smartphone, hoy i Samuel Sia, profesora momba ny injeniera biomedika ao amin'ny University of Columbia any New York, ary mpanoratra mitarika an'ity famoronana ity.
Ny teknika hampiasaina hanaovana diagnostika avy amin'ny ra mitete dia tsotra ampiharina araka ny aseho amin'ity horonantsary nataon'i Tassaneewan Laksanasopin sy Tiffany Guo ity. © Sia Lab, Engineering any Columbia, YouTube
Fijerena valiny 34 raha tokony ho $ 18.450
Ny fampifangaroana ny teknolojia microfluidic miaraka amin'ny fisondrotana farany amin'ny elektronika mpanjifa dia ahafahan'ny diagnostika laboratoara sasany azon'ny ankamaroan'ny mponina manana fidirana finday avo lenta, hoy izy, ary afaka manova ny fomba fitaterana serivisy ara-pahasalamana. manerantany.
Ny kojakoja kely sy kely ary ampy hipetraka amin'ny tanana iray, dia azo amboarina amin'ny vidin'ny orinasa 34 $ - latsaky ny $ 18.450 ho an'ny fitaovana laboratoara mitovy amin'izany, hoy ny mpikaroka. Nahita fomba iray handanianan'ny fitaovana herinaratra kely izy ireo, izay tena ilaina any amin'ny firenena sasany izay manjavozavo ny fizarana herinaratra. Matanjaka ihany koa izy io, tsy mila fampiofanana kely akory ary tsy mila fikojakojana, hoy ny hevitr'ireo injenierany.
sokajy FAHASALAMANA SY FAMONJENA
Ahoana no hanomanana mafe?
Ahoana no handanjana ny fiainanao amin'ny Feng Shui (PDF)
Ny herin'ny fahazarana - Charles Duhigg (Audio)
Ny niandohan'ny Kemite an'ny Hebreo (Semita)